Xog: Maareeye iyo Axmed Cali Daahir oo isku qabtay arrin dhalisay isu hanjabid | Baahin Media
Xog: Maareeye iyo Axmed Cali Daahir oo isku qabtay arrin dhalisay isu hanjabid
Waxaa khilaaf culus uu soo ka dhax bilaawday Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo Xeer ilaaliyaha Qaranka Dr Axmed Cali Daahir kaas oo ka dhashay Wariye uu shaqada ka eryay Wasiir Maareeye.
Wariyaha Shaqada laga eryay oo ay qaraabo dhow yihiin Dr Axmed Cali Daahir ayaa sabab u noqday in labada mas’uul ay dhaxmarto dood kulul oo gaartay ilaa heer ay dhinacyadu isu hanjabaan.
Axmed Cali Daahir ayaa Wasiirka ka dalbaday in uu shaqada ku soo celiyo Wariyaha, waxaana dalabkaas diiday Wasiir Maareeyo waxayna arintaasi sababtay in dhinacyadu ay isu hanjabaan.
Xildhibaan kat irsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo kala dhaxgalay Khilaafka labada dhinac waxaana la sheegay in uu ku guuleestay xalinta Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo Xeer ilaaliyaha Dr Axmed Cali Daahir iyadoo dib loogu celiyay shaqada Wariyihii la eryay.
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Maareeye ayaa bilaabay ad adeeg iyo sidoo kale Ganaax, shaqo joojin iyo sidoo kale cabsi gelinta shaqaalaha Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya.
Wasiir Maareeye ayaa lagu yaqaanaa shaqo adeeg iyo ammaro adag oo la dul dhigo shaqaalaha Wasaaradda, waxaana hore shaqada warbaahinta madaxa banaan looga Joojiyay Abwaan Maki Xaaji Banaadir iyo Majaajiliiste Oday Cabdulle oo ka howlgali jiray warbaahinta madaxa banaan ee magaalada Muqdisho.